သင်အွန်လိုင်းသင့်ရထားလက်မှတ်တွေဝယ်ရန်နေရမည်အဘယ်ကြောင့်? | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > သင်အွန်လိုင်းသင့်ရထားလက်မှတ်တွေဝယ်ရန်နေရမည်အဘယ်ကြောင့်?
သငျသညျစိတျနှလုံးအနေဖြင့်တစ်ဦးခရီးသွားရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့အစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့ရထားစီး booking ၏အများဆုံးကုန်ကျစရိတ်အကျိုးရှိစွာလမ်းကိုရှာဖွေကြောင်းတော်တော်လေးသေချာ. သင်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် နည်းပညာရိုက်ကူးခြင်း, သငျသညျယခုသင်အင်တာနက်ကနေအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်, ဒီဖြစ်ပါသည် မြင့်မားအကျိုးရှိသော လူတိုင်းအတွက်. သင်သည်သင်၏အဘို့အစီစဉ်နေတယ်ဆိုရင် လာမယ့်နွေရာသီအားလပ်ရက်, သင်အလွယ်တကူယခုသင့်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်များနှင့်အကျိုးအမြတ်အထူးလျှော့စျေးရနိုင်. ဒီ post မှာတော့, ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ် ရထားဘွတ်ကင်က်ဘ်ဆိုက် အကျဉ်း. သင်ဆဲကအကြောင်းမသိလျှင်, သင်ဤ post ကိုလက်လွတ်မသငျ့သညျ.
ငါတို့သည်သင်တို့ခရီးသွားလာနေသောအခါသင်ကအများဆုံးလုပ်လိုလိုလားလားရှိကွောငျးသိရ. သငျသညျခရီးသွားလာတဲ့အခါသင်ရှည်လျားသောလူတန်းထဲမှာပေါ်လာဖို့ရှိသည်အခါကယ့်ကိုပျင်းစရာဖြစ်ပါသည်. သင်အွန်လိုင်းလက်မှတ်တွေဝယ်လျှင်, သင်အလွယ်တကူရှည်စီတန်းဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်ပြီးသင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏အချိန်ကိုကယ်တင် အလွယ်တကူ. သငျသညျသငျ့အိမျထဲကနေသင်အဘို့အပေးဆောင်တစ်ချိန်ကသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေဝယ်နိုင်, သငျသညျကိုအီးမေးလ်ကတဆင့်သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေရလိမ့်မယ်.
မြူးနစ် Hanover မှရထား
ဘာလင် Hanover မှရထား
Dresden Hanover မှရထား
သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံကယ်ဖို့လိုလိုလားလားရှိပါလျှင်, ဤသူသည်သင်တို့အစဉ်အဆက်ကြားဖူးတယ်အလွယ်ကူဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါအဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုသငျသညျပင်လက်မှတ်တစ် printout မလိုအပ်ပါဘူးရှိရာအချို့သော technique ကို enabled ထားပါတယ်. သင့်စာအုပ်ပြသနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့စမတ်ကိရိယာများပေါ်တွင်ကပြသသို့မဟုတ်သင့်ကတ်များပွတ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်.
Cologne Dresden မှရထား
မြူးနစ် Dresden မှရထား
Dresden မှမီးရထားမှ Hanover
ဟမ်းဘတ် Dresden မှရထား
အွန်လိုင်းလက်မှတ်ဘွတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် လျှော့စျေး သင်အချိန်ဖို့အချိန်ကနေပေးသော်လည်းနိုငျကွောငျး. သငျသညျနံနကျစောစောကြိုတင်စာရင်းသွင်းစေလိုလျှင်, သင်သည်သင်၏လက်မှတ်များအပေါ်အကျိုးအမြတ်အထူးလျှော့စျေးရဖွယ်ရှိဖြစ်ကြပြီးကဖြစ်ပါတယ် အလွန်ကြီးစွာသောအားသာချက် တစ်ဦး ခရီးသည် အမြဲရှာကြံ.
Cologne Heidelberg မှရထား
မြူးနစ် Heidelberg မှရထား
Hanover Heidelberg မှရထား
ဟမ်းဘတ် Heidelberg မှရထား
သင်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိုးရိမ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကလုံးဝဘေးကင်းလုံခြုံသည်နှင့်သင်စိတ်ပူဖို့မလိုအပ်ပါဘူးသင်တို့အားပြောပြရမည်. ငါတို့သည်သင်တို့ကဲ့သို့သောအနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်က်ဘ်ဆိုဒ်ကနေသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုဝယ်ယူရန်အကြံပြု တစ်ဦးကရထား Save သငျတို့သဘာမှမစိုးရိမ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး.
ဤမှသင်၏လက်မှတ်များဝယ်ယူများအတွက်အထိရောက်ဆုံးလမ်းညွှန်ချက်တချို့ရှိနေပါတယ် ရထားဘွတ်ကင်က်ဘ်ဆိုက်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထား. ယခုတွင်သင်သည်ခရီးသွားလာနေစဉ်တန်းစီရပ်သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေနှင့်သင်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ်ငွေကိုကယျတငျနိုငျ. သင်အလွယ်တကူရထားဘွတ်ကင်က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုရှာဖွေနှင့်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေ booking အလွန်ရိုးရှင်းနိုင်ပါတယ်.
တစ်ဦးရထားကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုဝယ်ယူမယ့်ကြီးမြတ်အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ရထားလက်မှတ်တွေ link ကို click နှိပ်ပြီးစာအုပ်ဆိုင်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် https://www.saveatrain.com အကျိုးအမြတ်ဈေးလျှော့ပေးသော်လည်းဖို့.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူပြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ link ကို ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-you-should-purchase-your-train-tickets-online%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#အွန်လိုင်း #ticketsonline လက်မှတ်တွေ ရထား ရထားလက်မှတ်တွေ